ကလေးတှမှော အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးတာက ဘာ့ကွောငျ့ ဖွဈတာလဲ?ဘယျလို ကာကှယျတားဆီးမလဲ? - Chit MayMay
Home Child Nutrition ကလေးတှမှော အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးတာက ဘာ့ကွောငျ့ ဖွဈတာလဲ?ဘယျလို ကာကှယျတားဆီးမလဲ?
မမေတေို့ရဲ့ ကလေးဟာ သူနှဈသကျတဲ့ အစားအစာတှကေိုတောငျစားဖို့ ငွငျးဆနျနပေါသလား? မိခငျအမြားစု ကွုံတှရေ့တာကတော့ သားသားမီးမီးတှေ အစာစားခငျြစိတျ နညျးပါးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အစားစားခငျြစိတျ တတျလိုကျကလြိုကျဖွဈတာဟာ အသကျ ၂နှဈနှငျ့ ၆နှဈအကွားကလေးတှမှော အမြားစုဖွဈပါတယျ။
အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးရငျ ကိုယျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးမှုက လိုကျပါလာတာကွောငျ့ ဖွဈပျေါရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ဖျောထုတျဖို့ ကလေးအထူးကုဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကလေးတှမှော အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးရတာဟာ ဒီအခကျြ ကိုးခကျြကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပွီး အစာစားခငျြစိတျပွနျလညျဖွဈလာအောငျ ဘယျလိုဂရုစိုကျပေးရမလဲဆိုတဲ့ အကွံပွုခကျြတှကေို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
ဖှံ့ဖွိုးမှုအပွောငျးအလဲက ကလေးတှမှော အစာစားခငျြစိတျ လြော့နညျးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ပထမ၁နှဈအတှငျး ကလေးတှဟော လြှငျမွနျစှာ ကွီးထှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈနှဈကြျောလာရငျ ကွီးထှားမှုနှုနျး နှေးကှေးသှားသလို အစာစားတဲ့နှုနျးလညျး နညျးသှားပါတယျ။ ဒီကာလအတှငျးမှာ အစာစားခငျြစိတျ ကဆြငျးတာက ပုံမှနျပါပဲ။
နာမကနျြးမှုက ကလေးတှကေို အစာစားခငျြစိတျတှေ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ လညျခြောငျးနာတာ၊ ဗိုကျအောငျ့တာ၊ ဝမျးလြှောတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ ဖြားတာ သို့မဟုတျ တခွားရောဂါလက်ခဏာတှေ ခံစားနရေလြှငျ ပုံမှနျစားနကေထြကျ နညျးသှားပါလိမျ့မယျ။ ကလေးအမြားစုက နပွေနျကောငျးလာတဲ့အခါ အစာစားခငျြစိတျ ပွနျလညျရရှိလာပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုက ကလေးငယျတှအေပျေါမှာ အစာစားခငျြစိတျဆုံးရှုံးမှုအပါအဝငျ ဆိုးကြိုးတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ အစာစားဖို့ စိတျမဝငျစားဘူးဆိုရငျ ၊ကောငျးကောငျးလညျး မအိပျဘူးဆိုရငျ စိတျဖိစီးမှု ခံစားနရေနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အစာစားခငျြစိတျလြော့နညျးမှုကို ဖွရှေငျးဖို့ စိတျဖိစီးရတဲ့အကွောငျးရငျးကို ဖျောထုတျဖို့နှငျ့ သကျသာစဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ ကလေးဘဝအတှငျး စိတျဖိစီးမှု ဖွဈရတာဟာ အခြို့သော အကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
စိတျဓါတျကခြွငျးက ကလေးတဈယောကျရဲ့ အစာစားခငျြစိတျဆုံးရှုံးရတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မိဘအမြားစုက ဝမျးနညျးတာနဲ့ စိတျဓါတျကတြာကို မှားယှငျးလရှေိ့ပါတယျ။ ဝမျးနညျးတာနဲ့ စိတျဓါတျကတြာက မတူပါဘူး။ ဝမျးနညျးတဲ့ ခံစားမှုက အခြိနျကွာလာရငျ ပြောကျသှားပမေယျ့ စိတျဓါတျကခြွငျးက အခြိနျဘယျလောကျကွာကွာ ပြောကျမသှားပါဘူး။ စိတျဓါတျကခြွငျးက ကလေးတဈယောကျကို ဝမျးနညျးစယေုံသာမဟုတျဘဲ သူ့ရဲ့ သာမနျဘဝကိုလညျး အနှောကျအယှကျဖွဈစပေါတယျ။
ကလေးဟာ အစားအသောကျ ပုံမှနျမစားလြှငျ၊ အရငျလို တတျတတျကွှကွှ ၊ ပြျောပြျောရှငျရှငျ မရှိလြှငျ စိတျဓါတျကမြှု ခံစားနရေတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့ စိတျဓါတျကနြတောကို ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျမတိုငျမီနှငျ့ ဆယျကြျောသကျ ကလေးတှဟော တခါတရံမှာ တီဗီထဲက ပိနျပိနျပါးပါး မျောဒယျတှကေို ကွညျ့ပွီး သူတို့လိုလှခငျြကွတာကွောငျ့ အစားလြော့စားတာတှေ၊ အစားမစားဘဲနတောတှေ ပွုလုပျတတျကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ တတျနိုငျသလောကျ အစာမစားဘဲ ကွာကွာနဖေို့ ကွိုးစားကွညျ့ကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ အစားစားတာတောငျမှ အဆီနညျးတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှေးစားတာ၊ ပိနျအောငျ အစားလြော့တာ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာတှေ လုပျလာကွပါတယျ၊ သငျ့ကလေးဟာ ကိုယျအလေးခြိနျနညျးပမေယျ့လညျး အစားရှောငျနပွေီဆိုရငျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျသငျ့တာထကျ ပိုပွီးလုပျနပွေီဆိုရငျ Anorexia Nervosa ခံစားနရေတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီအခါ သငျ့ကလေးကို ကနျြးမာစှာ အစာစားခငျြစိတျ ပွနျဖွဈလာဖို့ အထူးကုဆရာဝနျနှငျ့ သခြောတိုငျပငျပွီး အကွံပွုခကျြတှေ ရယူသငျ့ပါတယျ။
ကလေးဟာ မကွာသေးမီက ပဋိဇီဝဆေး သောကျခဲ့ရတယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ အစာစားခငျြစိတျက ကဆြငျးသှားနိုငျပါတယျ။ ကလေးမှာ အစာစားခငျြစိတျကဆြငျးတာက တခွားဆေးဝါးမြားနှငျ့ ပဋိဇီဝပိုးသတျဆေးရဲ့ ဆိုးကြိုးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သှေးအားနညျးတာက ကလေးတဈယောကျရဲ့ အစာစားခငျြစိတျကို ကဆြငျးစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ သှေးအားနညျးရောဂါ ခံစားတဲ့ ကလေးတှဟော အခွားသူတှထေကျ အားနညျး ပငျပနျးပွီး စိတျတိုလရှေိ့ပါတယျ။ မကုသဘဲထားမယျဆိုရငျ သှေးအားနညျးရောဂါက သငျ့လေးရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှု၊ ကြောငျးလုပျဆောငျခကျြတှအေပျေါမှာ အနှောကျအယှကျဖွဈစတောကွောငျ့ သငျ့ကလေး သှေးအားနညျးတယျလို့ သံသယရှိရငျ သှေးစဈကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ကလေးမှာ အူလမျးကွောငျးလှုပျရှားမှု ပုံမှနျမဟုတျတာက ဝမျးခြုပျခွငျးကို ဦးတညျစနေိုငျပါတယျ။ ကလေးမှာ အစာစားခငျြစိတျဆုံးရှုံးတာက ဝမျးခြုပျခွငျး၏ လက်ခဏာ တဈခုဖွဈပါတယျ။
အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးတာကို ဂရုစိုကျမှုနှငျ့ စောငျ့ရှောကျမှုတခြို့ဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျတာကွောငျ့ စိုးရိမျပူပနျစရာတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။
သငျ့ကလေးအတှကျ အစားအသောကျကို မွငျလိုကျတာနဲ့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးအောငျ၊ စားခငျြစဖှယျဖွဈအောငျ ပွငျဆငျပေးဖို့လိုပါတယျ။ အရသာရှိပွီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှလေညျး ဖွဈရပါမယျ။
အစာစားနခြေိနျမှာ ကလေးကို ဆူပူတာ၊ ကလေးနှငျ့ပွိုငျပွီး ငွငျးခုံတာတှေ မပွုလုပျပါနဲ့။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာမြား ရှေးခယျြစားဖို့ သငျ့ကလေးကို အားပေးပါ။
ကလေးတှဟော မုနျ့ပဲသရစောတှကေို ကွိုကျကွပါတယျ။ မမေတေို့က ကောငျးမှနျတဲ့ သရစောတှကေိုသာ ကြှေးသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ အာလူးကွျောအစား မွပေဲပွုတျလိုမြိုး၊ ကှကျကီးတှအေစား ဆနျးဒဝှဈ တို့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖုတျထားတာတှကေို ကြှေးသငျ့ပါတယျ။
မွပေဲက ပရိုတိနျးဓါတျတှပေါဝငျပွီး ကလေးရဲ့ အစာစားခငျြစိတျကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲကို မွပေဲအခွခေံထားတဲ့ အစားအစာမြား ပိုထညျ့ကြှေးပါ။
အစာစားခငျြစိတျ ဆုံးရှုံးတဲ့ ကလေးအမြားစုဟာ နှားနို့တှမွေငျရငျ ရှံကွပါတယျ။ကလေးဟာ နို့သောကျဖို့ ငွငျးဆနျနရေငျ ဒိနျခဲ၊ ဒိနျခဉျြနှငျ့ ခရမျပုံစံကဲ့သို့သော နို့ဖွညျ့စှကျစာတှကေို ကြှေးပါ။ ဒါတှကေို သူကွိုကျနှဈသကျလြှငျ နို့ထှကျပစ်စညျးမဟုတျတဲ့ နို့ကိုလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ၊
ကိုယျလကျလှုပျရှား အားကစားလုပျခွငျးက အစာစားခငျြစိတျရှိစတေဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ စကျဘီးစီးတာ၊ စကိတျစီးတာ၊ တဈခြို့အားကစားတှမှော ပါဝငျကစားတာက သငျ့ကလေးကို ကိုယျကာယ တတျကွှမှုရှိစတေဲ့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
သငျ့ကလေးဟာ အစာစားခငျြစိတျနညျးနလြှေငျ သူစားနိငျသလောကျကို နညျးနညျးခငျြးစီနှငျ့ ခဏခဏ ကြှေးပေးပါ။ အစာစားခငျြစိတျကို ပိုတိုးစပေါတယျ။
သငျ့ကလေးစားခငျြတဲ့ အစားအစာ စာရငျးကို ပွုလုပျပါ။ အရသာလညျးရှိပွီး အာဟာရပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာတှေ ဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ သူအကွိုကျဆုံးအစားအစာကို မွငျရငျ စားခငျြစိတျရှိလာနိုငျပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျတိုးမွှငျ့ဖို့ ကယျလိုရီသိပျသညျးတဲ့ အစားအစာမြားကို ရှေးခယျြပါ။
သငျ့ကလေးကို အစာမစားခငျ မိနဈသုံးဆယျမှာ ရသေောကျခိုငျးပါ။
သံပုရာရညျ၊ ဂငျြးနှငျ့ ရှာလကာရညျက အစာစားခငျြစိတျကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။
ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲမှာ အစိမျးရောငျနှငျ့ တခွား ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အရောငျအမြိုးမြိုးကို ထညျ့ပါ။ ရောငျစုံလေးဖွဈနတောက ကလေးအတှကျ စားခငျြစဖှယျဖွဈစပေါတယျ။
စတျောဘယျရီ၊ ပြားရညျ၊ ငှကျပြောသီး၊ ရခေဲနှငျ့ ဒိနျခဉျြတို့ကို ဖြျောရညျလုပျပေးပါ။
ကလေးရဲ့ အစာစားခငျြစိတျကို တိုးစဖေို့ သဘာဝနညျးလမျးအတျောမြားမြားရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခါတရံမှာ အစာစားခငျြစိတျကို ပိုပွီးဖွဈစတေဲ့ အာဟာရဖွညျ့စှကျစာ တိုကျဖို့လိုအပျနိုငျပါတယျ။
ကလေးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးတာက ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်တာလဲ?ဘယ်လို ကာကွယ်တားဆီးမလဲ?
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးဟာ သူနှစ်သက်တဲ့ အစားအစာတွေကိုတောင်စားဖို့ ငြင်းဆန်နေပါသလား? မိခင်အများစု ကြုံတွေ့ရတာကတော့ သားသားမီးမီးတွေ အစာစားချင်စိတ် နည်းပါးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစားစားချင်စိတ် တတ်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တာဟာ အသက် ၂နှစ်နှင့် ၆နှစ်အကြားကလေးတွေမှာ အများစုဖြစ်ပါတယ်။
အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးရင် ကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုက လိုက်ပါလာတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးရတာဟာ ဒီအချက် ကိုးချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး အစာစားချင်စိတ်ပြန်လည်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
၁။ ကြီးထွားမှုနှုန်း နှေးသွားခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးမှုအပြောင်းအလဲက ကလေးတွေမှာ အစာစားချင်စိတ် လျော့နည်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပထမ၁နှစ်အတွင်း ကလေးတွေဟာ လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်ကျော်လာရင် ကြီးထွားမှုနှုန်း နှေးကွေးသွားသလို အစာစားတဲ့နှုန်းလည်း နည်းသွားပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာ အစာစားချင်စိတ် ကျဆင်းတာက ပုံမှန်ပါပဲ။
နာမကျန်းမှုက ကလေးတွေကို အစာစားချင်စိတ်တွေ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ လည်ချောင်းနာတာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဖျားတာ သို့မဟုတ် တခြားရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရလျှင် ပုံမှန်စားနေကျထက် နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးအများစုက နေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါ အစာစားချင်စိတ် ပြန်လည်ရရှိလာပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုက ကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ အစာစားဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် ၊ကောင်းကောင်းလည်း မအိပ်ဘူးဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ စိတ်ဖိစီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့နှင့် သက်သာစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးဘဝအတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ရတာဟာ အချို့သော အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက် ကွယ်လွန်ခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင် သေဆုံးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကလေးနောက်တစ်ယောက် မွေးဖွားခြင်းကဲ့သို့သော မိသားစုပြဿနာများ
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိဘအများစုက ဝမ်းနည်းတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာကို မှားယွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာက မတူပါဘူး။ ဝမ်းနည်းတဲ့ ခံစားမှုက အချိန်ကြာလာရင် ပျောက်သွားပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းက အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပျောက်မသွားပါဘူး။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းက ကလေးတစ်ယောက်ကို ဝမ်းနည်းစေယုံသာမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ သာမန်ဘဝကိုလည်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ကလေးဟာ အစားအသောက် ပုံမှန်မစားလျှင်၊ အရင်လို တတ်တတ်ကြွကြွ ၊ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် မရှိလျှင် စိတ်ဓါတ်ကျမှု ခံစားနေရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာကို ဆရာဝန်နှင့် ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ (Anorexia Nervosa) ဝမှာကြောက်လို့ မစားခြင်း
ဆယ်ကျော်သက်မတိုင်မီနှင့် ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတွေဟာ တခါတရံမှာ တီဗီထဲက ပိန်ပိန်ပါးပါး မော်ဒယ်တွေကို ကြည့်ပြီး သူတို့လိုလှချင်ကြတာကြောင့် အစားလျော့စားတာတွေ၊ အစားမစားဘဲနေတာတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ တတ်နိုင်သလောက် အစာမစားဘဲ ကြာကြာနေဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အစားစားတာတောင်မှ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးစားတာ၊ ပိန်အောင် အစားလျော့တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေ လုပ်လာကြပါတယ်၊ သင့်ကလေးဟာ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းပေမယ့်လည်း အစားရှောင်နေပြီဆိုရင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်သင့်တာထက် ပိုပြီးလုပ်နေပြီဆိုရင် Anorexia Nervosa ခံစားနေရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါ သင့်ကလေးကို ကျန်းမာစွာ အစာစားချင်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာဖို့ အထူးကုဆရာဝန်နှင့် သေချာတိုင်ပင်ပြီး အကြံပြုချက်တွေ ရယူသင့်ပါတယ်။
ကလေးဟာ မကြာသေးမီက ပဋိဇီဝဆေး သောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်က ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမှာ အစာစားချင်စိတ်ကျဆင်းတာက တခြားဆေးဝါးများနှင့် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းတာက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို ကျဆင်းစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားတဲ့ ကလေးတွေဟာ အခြားသူတွေထက် အားနည်း ပင်ပန်းပြီး စိတ်တိုလေ့ရှိပါတယ်။ မကုသဘဲထားမယ်ဆိုရင် သွေးအားနည်းရောဂါက သင့်လေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကျောင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့် သင့်ကလေး သွေးအားနည်းတယ်လို့ သံသယရှိရင် သွေးစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဗိုက်ထဲမှာ သန်ကောင်တွေရှိရင် ကလေးရဲံ အစာစားချင်စိတ်ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ သန်ကောင်တွေက ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ဝမ်းသွားရင် သွေးပါခြင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်း သွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ကပ်ပါးကောင်အဖြစ် နေထိုင်ပါတယ်။
ကလေးမှာ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်မဟုတ်တာက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမှာ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးတာက ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးတာကို ဂရုစိုက်မှုနှင့် စောင့်ရှောက်မှုတချို့ဖြင့် ကာကွယ်နိုင်တာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်စရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကလေးတွေ အစားအသောက်မပျက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
သင့်ကလေးအတွက် အစားအသောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်၊ စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေလည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
အစာစားနေချိန်မှာ ကလေးကို ဆူပူတာ၊ ကလေးနှင့်ပြိုင်ပြီး ငြင်းခုံတာတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
ကလေးရဲ့ ပုံမှန်အစာစားချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများ ရွေးချယ်စားဖို့ သင့်ကလေးကို အားပေးပါ။
သင့်ကလေးကို မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာနှင့် ညစာအကြားမျာ သရေစာတစ်ခုခုကျွေးပါ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်ကြွမှုရှိဖို့ အားကစားလုပ်ခိုင်းတာ၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားခိုင်းပါ။
သူဗိုက်မဆာသေးလျှင် အစာစားဖို့ အတင်းမကျွေးပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် သူ့ပန်းကန်ထဲက အစားအစာကို ကုန်အောင်စားခိုင်းတာက မကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမှာ အစာစားချင်စိတ် တိုးပွားလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ကလေးရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးလာစေဖို့ သဘာဝ နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိပါတယ်၊၊
ကလေးတွေဟာ မုန့်ပဲသရေစာတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ မေမေတို့က ကောင်းမွန်တဲ့ သရေစာတွေကိုသာ ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အာလူးကြော်အစား မြေပဲပြုတ်လိုမျိုး၊ ကွက်ကီးတွေအစား ဆန်းဒဝှစ် တို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖုတ်ထားတာတွေကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။
မြေပဲက ပရိုတိန်းဓါတ်တွေပါဝင်ပြီး ကလေးရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲကို မြေပဲအခြေခံထားတဲ့ အစားအစာများ ပိုထည့်ကျွေးပါ။
အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးတဲ့ ကလေးအများစုဟာ နွားနို့တွေမြင်ရင် ရွံကြပါတယ်။ကလေးဟာ နို့သောက်ဖို့ ငြင်းဆန်နေရင် ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ချဉ်နှင့် ခရမ်ပုံစံကဲ့သို့သော နို့ဖြည့်စွက်စာတွေကို ကျွေးပါ။ ဒါတွေကို သူကြိုက်နှစ်သက်လျှင် နို့ထွက်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ နို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ခြင်းက အစာစားချင်စိတ်ရှိစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတာ၊ စကိတ်စီးတာ၊ တစ်ချို့အားကစားတွေမှာ ပါဝင်ကစားတာက သင့်ကလေးကို ကိုယ်ကာယ တတ်ကြွမှုရှိစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးဟာ အစာစားချင်စိတ်နည်းနေလျှင် သူစားနိင်သလောက်ကို နည်းနည်းချင်းစီနှင့် ခဏခဏ ကျွေးပေးပါ။ အစာစားချင်စိတ်ကို ပိုတိုးစေပါတယ်။
သင့်ကလေးစားချင်တဲ့ အစားအစာ စာရင်းကို ပြုလုပ်ပါ။ အရသာလည်းရှိပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူအကြိုက်ဆုံးအစားအစာကို မြင်ရင် စားချင်စိတ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမြှင့်ဖို့ ကယ်လိုရီသိပ်သည်းတဲ့ အစားအစာများကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ကလေးကို အစာမစားခင် မိနစ်သုံးဆယ်မှာ ရေသောက်ခိုင်းပါ။
အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကိုသုံးပါ။
သံပုရာရည်၊ ဂျင်းနှင့် ရှာလကာရည်က အစာစားချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
ကလေးရဲ့ အစားအစာထဲမှာ အစိမ်းရောင်နှင့် တခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက် အရောင်အမျိုးမျိုးကို ထည့်ပါ။ ရောင်စုံလေးဖြစ်နေတာက ကလေးအတွက် စားချင်စဖွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီ၊ ပျားရည်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ရေခဲနှင့် ဒိန်ချဉ်တို့ကို ဖျော်ရည်လုပ်ပေးပါ။
ကလေးရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းအတော်များများရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ အစာစားချင်စိတ်ကို ပိုပြီးဖြစ်စေတဲ့ အာဟာရဖြည့်စွက်စာ တိုက်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleသားသားမီးမီးတှအေတှကျ ကနျြးမာစှာ ကိုယျအလေးခြိနျတိုးစတေဲ့ အစားအစာမြား
Next articleအစားအသောကျက မြိုးပှားမှုကို ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျသလဲ? သငျဘာတှသေိထားသငျ့သလဲ?